I-Google Maps ngeke ikuvumele weqe isitobhi sakho esilandelayo sezithuthi zomphakathi | Izindaba zamagajethi
I-Google Maps ngeke ikuvumele weqe isitobhi sakho esilandelayo sezithuthi zomphakathi
IGoogle Maps ingelinye lamathuluzi asetshenziswa kakhulu yi-internet giant. Kusukela kwavela ngo-2005, leli thuluzi selithole izigaba ezahlukahlukene futhi lathuthukiswa. Umklamo wayo usanda kwenziwa kabusha futhi manje kwengezwa umsebenzi omusha othakazelisa kakhulu kulabo basebenzisi abavame ukusebenzisa izithuthi zomphakathi nsuku zonke noma yenza ezokuvakasha futhi awufuni ukweqa ibhasi, isitimela noma isitimela semetro.
Ngokuvuselelwa kwakamuva kweGoogle Maps - kwe-Android okwamanje - manje Izokuvumela ukuthi wazi igxathu negxathu konke ukunyakaza okufanele ukwenze phakathi nohambo lwakho lwansuku zonke ngokuthuthwa komphakathi. Ngaphezu kwalokho, into ethokozisayo ngalolu daba ukuthi lezi zaziso zizosebenza ngisho nangesikrini esikhiyiwe noma ngenkathi kwenziwa ezinye izinhlelo zokusebenza: ukufunda izindaba, i-e-book, ukuvakashela ukuxhumana nomphakathi noma ukubukela ividiyo ku-YouTube noma kwi-Netflix.
Izaziso zizovela njengezaziso esikrinini noma ngabe ukuphi okwamanje. Ngale ndlela umsebenzisi uzokwazi ngaso sonke isikhathi isitobhi esilandelayo nokuthi uzokwehla nini esitimeleni, ebhasini noma emetro. Yize singazi ukuthi "Isinyathelo ngesinyathelo" sizotholakalela i-iPhone, kuyiqiniso ukuthi ukusebenza kokuthi isitobhi sakho sekufikile kuyatholakala nge-iOS. Kunjalo, Kwisaziso ngasinye se-pop-up, umsebenzisi unikezwa ithuba lokuchofoza kuso bese eyithumela kuhlelo lokusebenza olukhulu ukuthola imininingwane eningiliziwe endleleni yokulandela.
Ngakolunye uhlangothi, asazi ngempela ukuthi kuzosebenza kanjani ezokuthutha zomphakathi ezisebenza ngaphansi komhlaba. Ngaphezu kwalokho, ingabe imininingwane enikezwe yi-GPS yemishini yethu ithembeke ngokuphelele? Ngabe kuzoba nokubambezeleka kokusebenza? Lokhu ngezinye zezinto ezingaziwa ezifika emqondweni. Noma kunjalo, I-Google Amamephu iyaqhubeka nokuba ngumholi ongenakuphikiswa kwinsizakalo ye-geolocation, zombili zihamba ngemoto zihamba.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-Google Maps ngeke ikuvumele weqe isitobhi sakho esilandelayo sezithuthi zomphakathi
Kuyinto ehlala ixaka kimi ukuthi ibingakaqaliswa ukusebenza. Ngikuthola kuwusizo olukhulu lapho ngicabanga ukuthatha ibhasi edolobheni engingalazi.
U-Ockel Sirius A Pro, amandla amaningi wale miniPC ephaketheni
I-Chrome izosivumela ukuthulisa ukudlala okuzenzakalelayo kwamavidiyo